အိမ်ဖောက်ထွင်း ခံလိုက် ရတာကြောင့် ငွေသားတွေ အပြင် အရေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်း တွေ ပါသွားတဲ့ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သီဟအောင် – Cele Oscar
လူကွမျး သရုပျဆောငျ ကိုကိုဦးရဲ့ သားခြောလေး သီဟအောငျ ကတော့ အကယျဒမီ ရှကွေို ကနတေဆငျ့ အနုပညာလောက ထဲက စတငျဝငျ ရောကျလာခဲ့ပွီး ကွျောငွာတှရေိုကျကူးကာ အောငျမွငျမှု တှေ အထိုကျအလြောကျ ရရှိထားသူပဲ ဖွဈပါတယျ..။သီဟအောငျကတော့ လကျရှိအခွအေနေ တှမှော အားလုံးနဲ့အတူရပျတညျကာ လှုပျရှားမှုတှကေို ဝမြှေပွောပွ တတျသလို သူ့ရဲ့နအေိမျ ဖော ကျ ထှငျးခံလိုကျရတဲ့ အကွောငျးတှကေိုလညျး ပွောပွလာပါတယျ..။
နလေ့ညျပိုငျး ၁နာရီ ဝနျးကငျြလောကျ အပွငျခဏ ထှကျနခြေိနျ မှာပဲ အိမျဖောကျ ခံလိုကျရတာဖွဈပွီး ငှသေား(၂)သိနျးကြျော၊ အရေးကွီးတဲ့ စာရှကျစာတမျး၊ ကားစာအုပျ၊ မွဂေရံစာခြုပျ နဲ့ အခွားပစ်စညျးတှေ လညျး ပါသှား တယျလို့ သိရပါတယျ..။မှနှေောကျရှာဖှေ သှားပွီး ဖောကျထှငျး ခံလိုကျရတဲ့ အိမျအတှငျးပိုငျး ပုံတှေ ကိုလညျး သီဟအောငျက ဓာတျပုံတှနေဲ့ အတူ ဝမြှေရငျး စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတ ယျ.
“🙏🙏ကြှနျတေျာ့အိမျ နလေ့ညျ၁၂နာရီ၁နာရီ ဝနျးကငျြ မှာ အပွငျ ခဏ ထှကျနခြေိနျမှာပဲ ဖောကျခံလိုကျ ရပါတယျဗြာ..အရေးကွီးသော စာရှကျ စာတမျး မွဂေရံ စာခြုပျမြား ကားစာအုပျ (YGN 9E-5677)၊ ငှသေား ၂သိနျးကြျော နှငျ့ အခွား ပစ်စညျးမြား ပါသှား ပါသညျ.. ကြှနျတေျာ့ Fans တှေ ပေးထားတဲ့ ပစ်စညျး တှပေါ ပါသှားလို့ပါ.. ကြေးဇူးပွု၍ ဝိုငျးဝနျး Shareပေးကွပါခငျဗြာ🙏🙏 ပွငျဦးလှငျ..” ဆို ပွီး ရေးသားပွောပွထားတာပါ..။အဲ့ဒီပို့ဈအောကျမှာ တော့ ပရိသတျတှအေားလုံးကလညျး အခုလို ခကျခဲနကွေတဲ့အခြိနျမှာ အိမျဖောကျထှငျး ခံလိုကျရတဲ့ သီဟအောငျ အတှကျ အားပေးစကားတှေ နဲ့အတူ ဂရုစိုကျဖို့ကိုလညျး သတိပေးပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။
လူကြမ်း သရုပ်ဆောင် ကိုကိုဦးရဲ့ သားချောလေး သီဟအောင် ကတော့ အကယ်ဒမီ ရွှေကြို ကနေတဆင့် အနုပညာလောက ထဲက စတင်ဝင် ရောက်လာခဲ့ပြီး ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးကာ အောင်မြင်မှု တွေ အထိုက်အလျောက် ရရှိထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။သီဟအောင်ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေ တွေမှာ အားလုံးနဲ့အတူရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဝေမျှပြောပြ တတ်သလို သူ့ရဲ့နေအိမ် ဖော က် ထွင်းခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း ပြောပြလာပါတယ်..။
နေ့လည်ပိုင်း ၁နာရီ ဝန်းကျင်လောက် အပြင်ခဏ ထွက်နေချိန် မှာပဲ အိမ်ဖောက် ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး ငွေသား(၂)သိန်းကျော်၊ အရေးကြီးတဲ့ စာရွက်စာတမ်း၊ ကားစာအုပ်၊ မြေဂရံစာချုပ် နဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေ လည်း ပါသွား တယ်လို့ သိရပါတယ်..။မွှေနှောက်ရှာဖွေ သွားပြီး ဖောက်ထွင်း ခံလိုက်ရတဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်း ပုံတွေ ကိုလည်း သီဟအောင်က ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ အတူ ဝေမျှရင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်.
“🙏🙏ကျွန်တော့်အိမ် နေ့လည်၁၂နာရီ၁နာရီ ဝန်းကျင် မှာ အပြင် ခဏ ထွက်နေချိန်မှာပဲ ဖောက်ခံလိုက် ရပါတယ်ဗျာ..အရေးကြီးသော စာရွက် စာတမ်း မြေဂရံ စာချုပ်များ ကားစာအုပ် (YGN 9E-5677)၊ ငွေသား ၂သိန်းကျော် နှင့် အခြား ပစ္စည်းများ ပါသွား ပါသည်.. ကျွန်တော့် Fans တွေ ပေးထားတဲ့ ပစ္စည်း တွေပါ ပါသွားလို့ပါ.. ကျေးဇူးပြု၍ ဝိုင်းဝန်း Shareပေးကြပါခင်ဗျာ🙏🙏 ပြင်ဦးလွင်..” ဆို ပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။အဲ့ဒီပို့စ်အောက်မှာ တော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း အခုလို ခက်ခဲနေကြတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ဖောက်ထွင်း ခံလိုက်ရတဲ့ သီဟအောင် အတွက် အားပေးစကားတွေ နဲ့အတူ ဂရုစိုက်ဖို့ကိုလည်း သတိပေးပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
Miss Universe အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင် ပွဲကို သွားရောက်အားပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်